Homeसमाचारकिन भयो विप्लव र रेखा थापाबीच भेट ?
March 8, 2021 admin समाचार 5866
नेपाली फिल्मकी चर्चित अ’भिनेत्री रेखा थापाले नेकपा महासचिव नेत्र’विक्रम चन्द ‘विप्लव’सँग भेट गरेकी छन् । उनले समाजिक संजाल फेसबुकमा भेटको एक तस्विर सा’र्वजनिक गर्दै भेटको बारेमा जानकारी दिएकी हुन् । केही दिन अगाडि सरकार’सँग वार्ता र सम्झौता गर्दै शान्तिपूर्ण राजनी’तिमा आएका ‘विप्लव’ र रेखाबीच किन भेट भयो भन्नेबारे चासो हुनु स्वा’भाविक हो । उसो त सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिवन्ध लगाएपछि रेखाले विरो’ध समेत गरेकी थिइन् ।
यहीबीचमा उनको भेट’वार्तालाई लिएर विभिन्न आकलन र टिकाटिप्पणी भइर’हेको बेला रेखाले ‘विप्लव’सँगको आफ्नो भेटलाई राजनीतिक रुपमा नहर्ने आग्रह गरेकी छन् । ‘‘विप्लव’सँग मेरो भेट एउटा क’लाकार र राजनीतिक नेता बीचको भेट मात्र हो’ रेखाले भनिन् ‘भेटमा राज’नीतिक भन्दा पनि ब्यक्तिगत र कला क्षेत्रको बारेमा हामीले कुरा गर्यौँ ।’ कलाकारका हिसावले सबै’सँग आफ्नो भेटघाट हुने र गर्ने गरेको समेत रेखाले सुनाइन् ।
‘म एक राजनी’तिक पार्टीको नेतृ हुनु अगाडि कलाकार र समाजसेवी पनि हुँ’ रेखाले थपिन् ‘सोही हिसा’वले ‘विप्लव’सँग भेटेकी हुँ ।’विप्लव’ भूमिगत हुँदा आफूले प्रति’बन्धको विरोध गरेको भएकोले पनि त्यसप्रति धन्यवाद दिन आफूलाई ‘विप्लव’ले बोलाएकाले भेटेको रेखाले बताइन् । फिल्म निर्माण र अभि’नयमा क्रियाशीलताका अलवा रेखा राप्रपामा पनि आवद्ध छिन् । यसैबीच रेखा अहिले नयाँ फिल्म निर्माण तयारी छन् । फिल्मको वैशा’खबाट सुटिङ तयारी भैरहेको उनले बताइन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्- वाग्मती प्रदेशका मुख्य’मन्त्री डोरमणि पौडेलले पितृसत्तात्मक सोच र चिन्तनलाई हटाउन सक्दा मात्र महिला दिवसको नाराले सार्थ’कता पाउने बताएका छन् । अन्तररा’ष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले महिला हकहित र अधिकारका सन्दर्भमा नेपालले संवैधा’निक तथा कानूनीरुपमा विविध सका’रात्मक प्रबन्ध गरेको उल्लेख गरे ।
“प्रत्येक वर्ष मार्च ८ गते विश्व’भर लैङ्गिक समानता, महिला हकहित र अधिकारमा जोड दिँदै मनाउने गरिएको अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवसको सम्पूर्ण दिदीबहि’नीमा हार्दिक शुभकामना ब्यक्त गर्दछु”, मुख्यमन्त्री पौडेलले सन्देशमा भनेका छन् । यस वर्ष १११औँ अन्त’रराष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा ‘महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगार, समृद्ध नेपालको आधार’ भन्ने राष्ट्रिय नारा तय गरि’एको छ ।
महिला हकहित र अधिका’रका सन्दर्भमा नेपालले संवैधानिक तथा कानूनीरुपमा विविध सका’रात्मक प्रबन्ध गरेको छ । यसैका कारण राष्ट्रपतिको गरिमामय जिम्मेवारीदेखि सङ्घ, प्रदेश एवं स्थानीय सर’कारसम्म महिलाको उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व सम्भव भएको शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ । शुभकामना सन्दे’शमा भनिएको छ “आधा हिस्सा जनसङ्ख्या आगटेका महिलाको नीति निर्माणको तहमा बलियो उपस्थिति भए तापनि संवि’धान र कानूनमा उल्लेखित प्रबन्धको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि थप पहलक’दमीको आवश्यकता छ ।
विग’तदेखि नै जरा गाढेर बसेको पितृसत्ता’त्मक सोंच र चिन्तनलाई हटाउन सक्दा मात्र महिला दिव’सको नाराले सार्थकता पाउन सक्दछ । यसका लागि प्रदेश सरकार ठोस नीति र कार्यक्रमसहित अघि बढेको छ । अन्तर’राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा सरकारको यस अभियानमा सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनी एवं सरोका’रवाला निकायको साथ र सहयोगको अपेक्षासहित पुनःहार्दिक शुभ’कामना व्यक्त गर्दछु ।” – रातोपाटीबाट
कन्चनको मृ’त्यु पछि आमाले दुई हात जोडेर अनिशालाई भनिन् : “छोराको काम गर्न आउनु नत्र श’व उठाउने छैनौ” (भिडियो सहित)
सधैंका लागि अस्ताए नेपाली कलाकारिता क्षेत्रका चम्किला तारा सम्भुराज थापा (बखते)
August 21, 2021 admin समाचार 4581
कलाकार शम्भुराज थापा ‘बखते’को नि|धन भएको छ । उनको आज बिहान नि|धन भएको हो । कलाकार तथा निर्देशक मरिचमान श्रेष्ठ (बल्छी धुर्बे)ले उनको निध`न भएको सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत जानकारी दिए । उनलाइ ललित`पुरको पाटन
यसरी मनाए अभिनेत्री प्रियंका कार्की र आयुष्मान देशराजले नया बर्ष !
April 15, 2021 admin समाचार 5715
काठमाडौं- प्रियंकाले आफ्नो फेसबुक’मार्फत् सबैलाई नया बर्षको शुभ’कामना दिएकि छिन। पोस्टमा आफ्नो र श्रीमान आयुष्मान देशराज जोशीको फोटो सेयर गर्दै प्रियं’काले लेखेकी छन्, नया बर्षको यहाँहरु सबैमा हार्दिक मंग’लमय शुभकामना। नेपाली सिने ज’गतकी चर्चित नायिका
September 22, 2020 admin समाचार 12659
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) आफन्त तथा चेलि माईति बिच बैमनस्यता बढ्ने ग्रहयोग रहेकोछ सचेत रहनुहोला । व्यापार व्याव’सायमा समय दिन नस’क्दा घाटा लाग्न सक्छ ध्यान दिनुहोला । माया प्रेममा धोका हुनेछ भने पति दाम्पत्य जीव’नमा घट’पट आउनेछ